Ma jirtaa ammaanka kasta oo 3D daabacay baabuur koronto? Ha ku dhicin in aad si aad u furto? - Shiinaha Cixi Lanbo Daabacaadda
Ma jirtaa ammaanka kasta oo 3D daabacay baabuur koronto? Ha ku dhicin in aad si aad u furto?
technology daabacaadda 3D ku salaysan yahay model ah digital, iyadoo la isticmaalayo qalab bondable sida birta budada ah ama caag ah si aad u daabacdo dhismeedka of lakabka shayga by lakabka. technology waxa uu leeyahay codsiyada in beerihii dahabka, kabaha, design warshadaha, dhismaha, injineernimada iyo dhismaha, baabuurta, aerospace, iyo ilkaha.
Bishii November 2010, urbee baabuur ugu horeysay adduunka ee la daabacay on printer 3D ka yimid. Recently, Talyaani saaraha gaariga korontada XEV ku dhawaaqday in ay la shaqayn doonaa Shiinaha ee 3D shirkadda qalabka printer polymake in ay soo saaraan 3D daabacay LSEV gaariga korontada, kaas oo noqon doona ugu horeysay mass-soo saaray 3D dunida ee ku daabacan baabuur koronto. wareegga wax soo saarka ee gaariga this ku saabsan yahay In 3 maalmood, gaariga uu leeyahay xawaare sare ee 43 mph, hal lacag 93 miles, iyo baabuur buuxa culeyskiisu yahay 450 kg.
Dabcan, Japan ee Honda ayaa dhawaan sidoo kale dhisay baabuur koronto hal kursi-a, jidhka waa ku dhawaad ​​ka kooban darfaha 3D daabacay, oo hadda inta badan loo isticmaalaa in lagu soo diri buskud, laakiin Honda ayaa sheegay in model ku haboon wax soo saarka mass waa. Inkasta oo ma jiraan wax xog qaabeynta gaar ah 3D daabacay baabuurta korontada, gaar ahaan xogta ammaanka, sida technology ku ool ah, waxa dhici karta xitaa in technology ah in ay jabiyaan qorshihii warshadaha. Waa in aanu maskax furan si ay u aqbalaan. Laga soo bilaabo baabuurta korontada 3D hadda ku daabacan, waxay ku urursan yihiin beerihii miniaturization iyo-xawaaraha hooseeyo. Waxaan aaminsanahay in ay jiri doonaan xogta ku habboon on baabuurta korontada 3D daabacan ee 1-2 sano ee soo socota, sida amaanka iyo Oxperts baabuurta. , Raaxo iyo in ka badan. The 3D daabacaadda baabuurta korontada wali waa bilaw, oo waxaa jiri doona xeerarka iyo warar ku saabsan baaritaanka ammaanka iyo waayo-aragnimo door ka mid ah baabuurta soo socda, si ay baabuurta ku kalsoon tahay by macaamiisha yeelan doonaa suuqa, si mustaqbalka fog, 3D daabacay baabuur koronto ku soo noqon doonaa. The more cabiran. Dhab ahaantii, qoraagu ma fikiraan in la furo 3D daabacay baabuur koronto, haddii 3D this daabacaadda kharashka gaariga korontada ku yar yahay, ammaanka waa la hubaa, oo la kulmi karaan baabuur gaar ah u baahan yahay sababta ma waxaa isku day!
waqti Post: Aug-16-2018